Remarks as prepared for Aler Grubbs, USAID Mission Director at the Launch of the Union Attorney General’s Office Strategic Plan for 2020 – 2024 | January 21, 2021 | Burma | U.S. Agency for International Development
Home » News and Information » Speeches » Remarks as prepared for Aler Grubbs, USAID Mission Director at the Launch of the Union Attorney General’s Office Strategic Plan for 2020 – 2024
The Union Attorney General's Office is launching their new five-year strategic plan for 2020-2025. This plan builds the institutional capacity of the Union Attorney General's Office by adopting modern, progressive, and internationally accepted procedures across all departments. We all understand and appreciate how vital this effort is. The United States is proud to have partnered with the Union Attorney General's Office in supporting your efforts to develop this Strategic Plan.
The Union Attorney General's Office is the cornerstone institution in the Government's efforts to strengthen the rule of law for the people of Myanmar. The people of the United States, through USAID, our Department of Justice, and the Department of State, are committed to strengthening our partnership with the Union Attorney General's Office to reach the goal of providing justice for all.
All of us recognize the hard work of the Union Attorney General's Office staff in developing this excellent blueprint for future operations for the next five years.
Our collaboration with the Union Attorney General's Office began in early 2019 when USAID's Promoting the Rule of Law in Myanmar project conductedaHuman and Institutional Capacity Development Assessment. Mr. Attorney General, your staff studied the data and conducted an extensive evaluation of the operations and policies of the organization. This providedadetailed understanding of the scope of your operations. You haveastrong framework for evaluating the results you achieve against your goals and objectives. This demonstrates your clear commitment to the rule of law and service to all of the people of Myanmar.
Your strategic plan is designed to advance many goals and objectives of the Union Coordination Body for Rule of Law Centers and Justice Sector Affairs’s Strategic Plan. The government's blueprint for the sector heavily influenced Goal5of the new Union Attorney General's Office Strategic Plan, where you commit to taking an active role in Justice Sector reform. You are to be commended for your efforts, and USAID was honored to contribute to this important process.
Your Strategic Plan is something all Union Attorney General's Office staff should be proud of; it is ambitious and forward-looking. The first goal recognizes that effective and efficient operations and administration lay the foundation for providing high-quality services to the people and Government of Myanmar … but as you have recognized, efficiency on its own is not enough.
In the Union Attorney General's Office’s role as the government's lawyer, the plan recognizes that sound advice to the government, and the Hluttaw, is required forasuccessful functioning government, and to the ongoing reform efforts within the government and in the economy
You have committed to enhancing the role of prosecutors; ensuring your law officers become pillars ofafair and just criminal justice system. The plan acknowledges the importance of public trust. Integrity, along withahigh-performing Union Attorney General's Office, can only be achieved by holding law officers to the highest standards of professionalism. Your emphasis on Fair Trial standards and the Code of Ethics will build greater public trust and confidence in this important institution.
The Union Attorney General's Office is at the heart of the government's efforts to advance Myanmar's democratic transition. The final goal recognizes the Union Attorney General's Office's crucial role in strengthening and improving the justice sector,anecessity forathriving democracy.
USAID is honored to join with you in launching this landmark Strategic Plan, which brings us well into the new decade. The United States Government is committed to its partnership with the Union Attorney General's Office to strengthen this important program's implementation. The work ahead will be challenging, but it is good work and well-worth it.
နောက်လာမယ့်ငါးနှစ်မှာ အနာဂတ်လုပ်ဆောင်မှုတွေအတွက် ဒီကောင်းမွန်တဲ့အစီအစဥ်ကို ရေးဆွဲရာမှာ ပြည်ထောင်စုရှေ့ချုပ်ရုံးရဲ့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုကို မိမိတို့အားလုံး အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။
USAID ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်းဟာ လူသားစွမ်းရည်နဲ့ အဖွဲ့အစည်းပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်မှုတစ်ခုကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် အစောပိုင်းမှာ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကတည်းက ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ရှေ့နေချုပ်ကြီးရှင့်၊ လူကြီးမင်းရဲ့ ဝန်ထမ်းတွေဟာ ဒေတာ (အချက်အလက်) တွေကို လေ့လာခဲ့ပြီး အဖွဲ့အစည်းရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေ၊ မူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လေ့လာသုံးသပ်မှုတွေ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလေ့လာသုံးသပ်မှုဟာ လူကြီးမင်းရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုနယ်ပယ်ကဏ္ဍကို အသေးစိတ်နားလည်စေခဲ့ဖို့ အထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ ပန်းတိုင်နဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေကို ရောက်ရှိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ ရလဒ်တွေကို သုံးသပ်နိုင်ဖို့အတွက် လူကြီးမင်းတို့မှာ ခိုင်မာတဲ့ မူဘောင်ရှိပါတယ်။ မြန်မာပြည်သူတွေအားလုံးကို တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့အတွက် ဒီအချက်ဟာ လူကြီးမင်းရဲ့ ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ ကတိကဝတ်ကို ဖော်ပြပေးနေပါတယ်။
တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးစင်တာတွေနဲ့ တရားရေးကဏ္ဍရဲ့ မဟာဗျူဟာအစီအစဥ်အတွက် ပြည်ထောင်စု ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ရဲ့ ပန်းတိုင်တွေ၊ ရည်ရွယ်ချက်တွေကို တိုးတက်စေဖို့ လူကြီးမင်းရဲ့ မဟာဗျူဟာအစီအစဥ်ကို ရေးဆွဲထားပါတယ်။ ဒီကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီး တရားရေးကဏ္ဍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမှာ လူကြီးမင်းအနေနဲ့ တက်ကြွတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကပါဝင်ဖို့ ကတိပြုထားတဲ့ ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်ရုံးရဲ့ မဟာဗျူဟာအစီအစဥ် ပန်းတိုင်နံပါတ် (၅) ကို အစိုးရရဲ့ အသေးစိတ်အစီအစဥ်က အများကြီးလွှမ်းမိုးထားပါတယ်။ လူကြီးမင်းရဲ့ ကြိုးပမ်းမှုတွေအတွက် ချီးကျူးလိုပါတယ်။ ဒီအရေးကြီးတဲ့ဖြစ်စဥ်မှာ ပါဝင်ခွင့်ရလို့ USAID အနေနဲ့လည်း ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။
လူကြီးမင်းရဲ့ မဟာဗျူဟာအစီအစဥ်ဟာ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးက ဝန်ထမ်းအားလုံး ဂုဏ်ယူသင့်တဲ့ အရာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအစီအစဥ်ဟာ အများကြီးမျှော်မှန်းထားပြီး ရှေ့ကိုမျှော်ကြည့်ထားတဲ့ အစီအစဥ်ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ အစိုးရကို အရည်အသွေးမြင့်မားတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေ ပေးရာမှာ ထိရောက်ပြီး သက်သာမြန်ဆန်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ စီမံအုပ်ချုပ်မှုတွေဟာ အခြေခံဖြစ်တယ်လို့ ပထမပန်းတိုင်က အသိအမှတ်ပြုထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူကြီးမင်းတို့ သိပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်း သက်သာမြန်ဆန်မှုတစ်ခုတစ်ခုတည်းနဲ့တော့ မလုံလောက်ပါဘူး။
အစိုးရရှေ့နေအနေနဲ့ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးရဲ့ အခန်းကဏ္ဏမှာ အစိုးရနဲ့ စီးပွားရေးအတွင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ဖို့နဲ့ အောင်အောင်မြင်မြင် လည်ပတ်နိုင်တဲ့ အစိုးရဖြစ်လာဖို့အတွက် အစိုးရနဲ့ လွှတ်တော်ကို ကောင်းမွန်တဲ့ အကြံဉာဏ်တွေ ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ ဒီအစီအစဥ်က အသိအမှတ်ပြုထားပါတယ်။
လူကြီးမင်းရဲ့ ဥပဒေအရာရှိတွေဟာ တရားမျှမှုရှိတဲ့ ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ တရားရေးစနစ်မှာ အဓိကမဏ္ဏိုင်တွေ ဖြစ်လာပြီး အစိုးရရှေ့နေတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို တိုးမြှင့်အတွက် လူကြီးမင်းတို့ဟာ တစိုက်မတ်မတ် လုပ်ဆောင်နေပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအစီအစဥ်ဟာ အများပြည်သူတွေရဲ့ ယုံကြည်မှုရဲ့ အရေးပါမှုကို အသိအမှတ်ပြုထားပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်မားမှုနဲ့အတူ ဥပဒေအရာရှိတွေကို အမြှင့်ဆုံးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဆင့်မှာ ကိုင်စွဲထားခြင်းအားဖြင့် ယုံကြည်ကိုးစားထိုက်တဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကို ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တရားမျှတတဲ့ တရားစီရင်ရေးအဆင့်တွေနဲ့ ကျင့်ဝတ်တွေအပေါ် လူကြီးမင်းတို့ အလေးထားလုပ်ဆောင်ခြင်းဟာ ဒီအရေးပါတဲ့ အင်စတီကျူးရှင်းအပေါ် အများပြည်ရဲ့ယုံကြည်လက်ခံလာမှု ပိုမိုရရှိဖို့ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးကို တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ဖို့ အစိုးရရဲ့ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေရဲ့ အချက်အချာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးပန်းတိုင်မှာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ တရားရေးကဏ္ဍကို အားကောင်းလာအောင်ပြုလုပ်ရာမှာ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးရဲ့ အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို အသိအမှတ်ပြုထားပါတယ်။
ဒီအရေးကြီးတဲ့ မဟာဗျူဟာအစီအစဥ် စတင်ရာမှာ လူကြီးမင်းတို့နဲ့အတူ ပါဝင်ဆင်နွဲခွင့်ရလို့ ကျမအနေနဲ့ ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ဒီမဟာဗျူဟာအစီအစဥ်ဟာ မိမိတို့ကို ဆယ်စုနှစ်အသစ်တစ်ခုသို့ ခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီအရေးပါတဲ့ စီမံကိန်းကို အကောင်ဖော်မှုကို တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစိုးရဟာ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနဲ့ မိတ်ဘက်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုကို တစ်စိုက်မတ်မတ်လုပ်ဆောင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေ့လာမယ့် လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာ စိတ်ခေါ်မှုတွေ ရှိလာပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ ကောင်းမွန်ပြီးတော့ လုပ်သင့်တဲ့ အလုပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။